Maraykanka oo dhimaya miisaaniyada - BBC Somali - Warar
Maraykanka oo dhimaya miisaaniyada
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 Maarso, 2013, 12:32 GMT 15:32 SGA
Madaxweyne Obama ayaa doonayay in canshuuraha la kordhiyo si dadka aysan shaqo la'aan ugu dhicin, laakiin waa lagu heshiin waayay.
Madaxweyne Obama ayaa ka digay ganacsatada la shaqaysa milatariga iyo shaqaale kale oo dowladda u shaqeeya inay shaqadooda wayn doonaan, kadib markii uu saxiixay siddeetan bilyan oo dollar oo lagu dhimayo miisaaniyada.
Qudbadiisa toddobaadlaha ayaa Obama uu ku sheegay, in dhimista miisaaniyada ay wax u dhimi doonto dhaqaalaha.
Xisbiyada Dimoqraadiga iyo kan Jamhuuriga, ayaa ka soo horjeeda dhimista misaaniyada oo lagu heshiiyay 2011 si loo dhimo ammaahda lagu leeyahay Maraykanka. Labada xisbi ayaa ku guuldaraystay inay ku heshiiyaan heshiis cusub oo miisaaniyada lagu dhimo. Obama ayaa doonayay in la kordhiyo canshuuraha si miisaaniyada loo dhimo.